Umculi Uthembise Ukuthunga Izingubo Zakhe Unyaka Ongu-1 - Imfashini
Lo mculi uthembise ukuthi uzothunga izingubo zakhe unyaka wonke — njengendlela yokuzinakekela
This Artist Pledged Sew Her Own Clothes
izinwele zembewu emnyama
Kwabaningi bethu, ukuthatha isikhathi sokuvula kungabukeka njengokuqhekeza incwadi noma ukuvula umata we-yoga. Kumenzi wezinto zokuhloba waseBrooklyn, umklami wezindwangu kanye nendle uMartha Moore Porter, ukukhumula kusho ukuhlala phansi emshinini wakhe wokuthunga bese ushaya izingubo zakhe.
Ngibheka yonke inqubo yokuzenzela izingubo njengesenzo sokuzinakekela: umcabango wami, ubuchopho bami, izandla zami ezimatasa, kusho uPorter. Kuyazwakalisa, kepha kunemithetho futhi kuhlala kukhona okusha ongakufunda.
Njengesinqumo sonyaka omusha ka-2019, uPorter wathembisa ukuthi uzokwenzela izingubo zakhe unyaka wonke. Ekuqaleni, bekuyinselelo yomuntu siqu ukukhuthaza uPorter ukuthi asebenzise umshini wakhe wokuthunga kakhulu, kepha ekugcineni kwaba yinselelo yokuthatha isikhathi sakhe, echitha amahora kude nefoni yakhe.
Ngonyaka owedlule, ekuphindaphindweni kwangaphambilini kwale nselelo, uPorter wathembisa ukuthunga okungenani ingubo eyodwa ngenyanga. Ezinye zalezi zingcezu zazikhona umlando ku-Instagram yakhe ngaphansi kwegama lakhe elaziwa nge-inthanethi Wangcwaba iDayimane . Ekupheleni konyaka wayesedlulile kakhulu kulokho ayekulindele futhi wagcina enama-top 40, amalokwe, iziketi nokunye. Ekhuthazwe yimpumelelo yakhe emangazayo, uPorter uthathe isinqumo sokuthatha isithembiso sokulungela ukugqoka unyaka wonke. A #RTWfast kumane kusho ukuthi abathungi (okuyiBTW, okuyigama elibhekise kumuntu othunga imisebenzi yobuciko) bazokuyeka ukuthenga izingubo zangaphambi konyaka. Ngalesi sikhathi, bangathenga indwangu namaphethini ukuze benze izingubo zabo futhi bangagqoka noma yini esivele ilenga ekhabethe labo. Kepha alukho uhambo oluya eZara ukuyothatha ingubo kulelo phathi elizayo noma ukuvakashela i-J. Crew ukuthola i-blouse engxoxweni enkulu.
Isiteshi sokuthunga sikaMartha Moore Porter. UMartha Moore Porter
Kusukela ngoJanuwari, uPorter wenze ijakhethi ye-puffer, amabhulukwe angaphambili enkinobho, uthingo lwezingubo zasehlobo ngisho nekhola enobuhlalu obuzogqokwa ngaphezulu kwamajezi namabhantshi ama-denim. Phew, kuzwakala njengomsebenzi omningi, akunjalo? Yebo, lelo iphuzu.
Ku-Porter, ukucabanga okudingekayo ngesikhathi senqubo yokuthunga yilokho okumvumela ukuba angene esimweni esizolile, sokuzindla, inhloso yangempela yokuzinakekela. Ngokusho kukaPorter, ukuthunga kuyinto yokufunda eqoqekayo, njengoba ukukala nezibalo kudinga ukuzijwayeza nokubekezela. Ukusuka ekufundeni ukufunda amaphethini kuze unqume ukuthi iziphi izindwangu ozozisebenzisela iphrojekthi ngayinye, ukudala isiqeshana sengubo kudinga ulwazi lokuhlangenwe nakho. UPorter ubelokhu ethunga kusukela eneminyaka engaba yishumi, ngesikhathi ethola umshini wokuthunga njengesipho. Futhi ngenkathi esengumpetha ngokuphelele kusukela lapho, akesabi ukubhala ukuthunga kwakhe kwehluleka ku-Instagram naku-Buried Diamond Ibhulogi , njengoba konke kuyingxenye yenqubo.
UMartha Moore Porter
Ingxenye yokudala kakhulu, okungenani iPorter, yilapho sekuyisikhathi sokubhangqa iphethini nendwangu. Ungumklami ngempela kulowo mzuzu, amanothi kaPorter. Uhlala njalo ethenga izinto zokwakha futhi unendwangu ebanzi yendwangu nephethini, njengoba kade eyiqoqa futhi eyiqoqoda iminyaka-kwesinye isikhathi eyithola ngokuthengiswa kwefa noma ekujuleni kwe-eBay. Kwezinye izimo, uPorter uzobona indwangu futhi azi kahle ukuthi ufuna ukwenzani ngayo; kwesinye isikhathi, usebenzisa izinsuku, amasonto noma izinyanga ukuthola ukuthi yini angayakha ngophrinta omusha wezimbali noma kasilika othambile we-pastel.
izindlela zemvelo zokumisa ukuwa kwezinwele
Futhi ngenkathi ezinye izingcezu zihambisana nendaba emnandi yokuhlangana, ezinye zisaqhubeka. Ngemuva kokwabelana ngenqubo egculisayo yokwakha ingubo emnyama yama-cherry enentamo ephakeme futhi igxumagxuma ngaphambili, uPorter uthumele ngengubo kaLaura Ashley ngesitayela esifana naleso ayesenze cishe ngonyaka owedlule. Ngesikhathi eqala ukwenza ingubo, uPorter wayithanda, kepha ngemuva konyaka wokuthunga okungaguquki wabona ukuthi le ndwangu yayingalungile: Indwangu yesikotini yokuvuna yayiminyene kakhulu, futhi ingubo yayifuna okuthile okulula kakhulu njenge-muslin. Ugcine ngokuguqula iqhwa likaLaura Ashley laba yihembe, okuyi-tweak elula yezingubo zokugqoka asethambekele kakhulu ekwenzeni ngesikhathi sokuzila kwakhe. Ngemuva kwezinyanga ezingaba yisithupha angibange ngisacabanga ngokusebenzisa kwami ​​imali, uyavuma.
Wayeyithanda inqubo yokwakha ihembe eliprintwe ngodiza eliphinki, kepha amajini amnyama anombala ahlela ukugqoka ngalo? Ngokucacile bekungathandeki kangako ukuthunga. Izikibha nejean kungabonakala kulula, kepha kungaba yizinto okunzima kakhulu ukuzenza kahle - futhi futhi yizona ezihamba phambili ohlwini lwezitolo lukaPorter lwango-2020.
Kumuntu ongajwayele izindwangu noma ukuthunga, lokhu kungazizwa njengesilingo esinamandla sokuqalisa. Kepha ukuzijabulisa kuyo yonke inqubo yokudala — ngaphandle komphumela — kuyisifundo esisizuzisa sonke.
ungamisa kanjani ama-imeyili ogaxekile
Labo abafuna ukuthatha ukuthunga kufanele baqale ngezindwangu ezifana nekotini ephothiwe nelineni, futhi baqale ngamaphethini alula afana nezicathulo ezingenamikhono, izikhwama zamathambo, amabhulukwe e-pajama noma intandokazi yezomnotho wasekhaya, ama-pillowcases. I-intanethi iyinsiza enkulu; Kokubili impumelelo kanye namaphutha angatholakala ngaphansi kwama-hashtag wephethini ku-Instagram, futhi umphakathi we-sewist uyawuthanda. Ukuzingela indwangu yama-vintage namaphethini kungaphenduka umdlalo wokuzijabulisa omnandi, ikakhulukazi ngenkathi usohambweni, kepha uma ungenalo iqoqo vele, uPorter uthanda Izindwangu ze-Stonemountain & Daughter kanye nezindwangu ezinhle zika-Jo-Ann ezisemadolobheni amakhulu, ezizoba nakho konke okubalulekile ozodinga ukukuqalisa.
Ngaphandle kwesipiliyoni sokuthunga noma isifiso sokuthunga izinsuku ezingama-365, ungacwilisa uzwane kulo mkhuba ngokudaya noma ukuhlobisa izingcezu ezikhona ongazithandi njengamanje. I-tie-dye mhlawumbe inqubo evame kakhulu yokuqabula, futhi elula kakhulu, kepha iPorter ikhuthaza ukudlala nayo Ukudaya udayi futhi, okubili okune-pigmented kakhulu futhi okungabizi. Ngenye indlela, amabala angavalwa ngezimagqabhagqabha futhi abamhlophe abangamachashazi bangavuselelwa ngodayi.
Ukuzinakekela kufanelekile, unomqondo osimeme futhi usesitayeleni? Yebo, lokhu kuyinselelo yemfashini efanele ukuzama — noma ngabe iholela esikibheni esisodwa esinebhayisikili.
OKUSHIWO: Abahleli be-T-Shirts ezimhlophe Abazithenga Ngokuphindaphindiwe
ama-movie okufanele uwabuke nomndeni
UJohn cena igama lomfazi
I-priyanka chopra movie entsha
izinhlobo zokusika izinwele zabesifazane
ungamisa kanjani ukuwa kwezinwele ngenxa yenkwethu
ama-thrillers amahle kakhulu ku-amazon prime